Semalt: Top 5 Web uye Zvokudya Zvokugadzira Zvinyorwa PaIndaneti
, kubvisa, uye kuongorora iyo data. Vanonyatsobudisa mashoko anobatsira kubva panzvimbo dzakasiyana-siyana, kunyanya data chaiyo-nguva. Kana iwe usingazivi kuti ungabvisa sei kubva pamapeji akasiyana emuwebhu, tinokurudzira kuti ukwanise kushandisa inotevera inoshamisa yewebhu nehuwandu hwekugadzirisa mazano. Vamwe vavo vakasununguka zvachose, asi vamwe vachakubhadhara chimwe chinhu kubva $ 20 kusvika ku $ 100 pamwedzi zvichienderana nezvamunoda.
Webhose. Io inopa kuwanikwa kwechinguva kune yakagadzirwa web content. Iyo inokubvisa kuti ubudise mashoko kubva mumabhuku ekubhuku, kuongororwa, mameji e-mail, uye mawebsite emashoko. Iwe unogona nyore nyore kuunganidza nekutsvaga nyaya dzakakosha uye dzinofambisa paInternet uchishandisa Webhose. io. Iyi haisi yevamwe web scraper asi muchengeti mukuru uye anopa zvinyorwa muJSON, RSS, Excel uye maFomu eXML. Uyezve, Webhose. Io inotibvumira kufuta data nokukurumidza uye kuongorora misika yemakethe kukuwana iwe mhinduro dzinonakidza zvikuru.
Dexi io imwe yebasa rekuchera webhu uye zvigadziro zvemigodhi. Iyo yakanyatsorongedzerwa kuti ibvise zvinyorwa kubva pamapeji akasiyana-siyana ewebhu uye inobatsira kuti uchengetedze zvabuda mumakore. Iwe unogonawo kuisa ruzivo neJSON, HTML, ATOM, XML uye mafomu eRSS, kukura bhizinesi rako uye kuwana mhinduro inoda munyaya yemaminitsi. Chinhu chakanakisisa ndechokuti bhuku rino richakupa iwe zvinhu zvinoshandiswa zvakadai sezvikwata zveproxy, zvigaro zvese zvinotsigirwa, uye Captcha solver.
ParseHub ndeimwe yekubatsira kwekutsvaga webhu uye nekugadzirisa migodhi yekushandisa mutsamba. Yakagadzirirwa kubvisa ruzivo kubva kune nzvimbo dzakawanda neExcel, CSV, JSON uye ParseHub API. Uyezve, neizvi haufaniri kunge uine unyanzvi hwekugadzira. Inopa zvinhu zvakasiyana-siyana zvakadai sokutsvaga makwikwi 'zvakagadzirwa. ParseHub inopa mararamiro akasiyana-siyana emakambani ekukubatsira iwe kutsvaga vangave vatengi munyika yose. Iyi ndiyo yegore-based application yezvose zvese zvekudhawa kwezvinhu zvinodikanwa.
80legs isati iri rimwe gore-based data extraction uye web scraping program. Inopa nhoroondo yepamusoro uye inoshandisa simba remapuraneti anopfuura makumi mashanu makumi mashanu akaendeswa munyika yose. Haisi kungovhiringidza data asiwo inokamba mapeji ako akasiyana-siyana. Iwe unongoda kuisa sevha uye rega ma 80legs anoita basa rayo. Iko mari yebasa iri rekugoverwa kwemigodhi yakabva kune zvinodiwa nevatengi, zvichiita kuti ive chigadziriro chinoshanda chekutanga.
5. Tumira. Io
Zvika. Io ndeimwe yezvinhu zvakanakisisa uye zvinoshamisa zvikuru zvigadziriswa migodhi uye data scraping tools . Iyo inokubvisa kuti uwane ruzivo kubva pane zvakasiyana-siyana nzvimbo uye unopa zvakasiyana-siyana zvinyorwa zvakabudiswa zvakadai sezera rokutungamirira, kuongororwa kwemitengo, kukudziridza kwekufambisa, kutsvakurudza kwemakemikari, kushandiswa kwemichina uye kuongorora zvidzidzo. Iwe haufaniri kunge uine unyanzvi hwekugadzirira kushandisa shanduri iyi. Muzvokwadi, inouya neshamwari-yakanaka uye inonzwisisika-inonzwisisikidziro uye zvinyorwa zvese zvakakodzerwa nedhesi yako pane inooneka. Tumira. Io ndiro sarudzo yekutanga yezvikwata zvakasiyana-siyana, SEO nyanzvi, vateereri, vashanduri vewebhu, uye vatsigiri vezvemagariro evanhu Source . Iyo inofanotaura nevatengi vanofambisa uye inofunga nezvekugadzirwa kwevadzidzi venyu